Warshadaha Koodhadhka Biyaha-Badda - Divenland
Budada Dib Loo Qaybin Karo
Qalabka dhismaha ee gypsum iyo guntin
Nidaamyada xiridda tuubbada
Nidaamka madhxiya hoobiye
Shamiitada xaashida laga soo saaray
Warshadaha Dahaarka Biyaha
Dahaarka biyaha ku saleysan
DIAGRAM QAAB-DHISMKA NIDAAMKA
Rinjiga ku saleysan biyaha waa dareere viscous ka sameysan resin, ama saliid, ama emulsion, oo ay weheliso waxyaabaha lagu daro, kuna diyaarsan mileyaasha dabiiciga ah ama biyo. Rinjiga biyaha-ku-saleysan ee wanaagsan ayaa waliba leh sifooyin hawl-gal aad u fiican, awood dhuumasho oo wanaagsan, isku-duub filim adag, sifooyin biyo-hayn wanaagsan iyo sifooyin kale. Cellulose ether waa sheyga ceyriinka ugu haboon ee bixiya guryaha.
Haysashada biyaha ee qulqulka unugyada unugyadu waxay bixiyaan waxyaabo daaha ka roon oo loogu talagay jaakaddo jilicsan, gaar ahaan gogosha sare ee PVC, iyo daaqa qaro weyn. Ma fallaadho; saameynteeda qaro weyn waxay yareysaa xaddiga la isticmaalo, wuxuu wanaajiyaa dhaqaalaha qaab dhismeedka wuxuuna wanaajiyaa waxqabadka nidaamka dahaarka. Cayrin. Hantida ugu wanaagsan ee rheological ee rinjiga waxay ilaalinaysaa isku dhejinta rinjiga ee gobolka taagan; Xaaladda lagu shubay, waxay leedahay qulqul aad u fiican oo aan lahayn wax buufin; fududahay in lagu faafiyo substrate inta lagu jiro cadayashada iyo daaha roller, fududahay in la dalbado; ugu dambeyntii, markii rinjiga la mariyo, way fududahay in lagu faafiyo substrate-ka. Neefsiga nidaamka ayaa dib loo soo celiyaa isla marka la dhammeeyo, midabkiisuna isla markiiba wuu jabayaa.
Ka dib daaweynta saxda ah ee dusha sare, ether Maxcellulose waxay si wax ku ool ah uga hortagi karaan agglomeration inta lagu jiro kala-baxa, si buuxda u kala firidhsan, waqtiga kala-baxa ku filan iyo heerka kororka nafwaayaha ayaa fududeyn kara habka wax soo saarka; wax laga beddelay etceliska Maxcellulose ethers sidoo kale waxay leeyihiin sifooyin anti-fangas wanaagsan, waxay bixiyaan waqti ku filan kaydinta rinjiga, ka hortagga wax ku oolka ah ee midabka iyo miyir beelka.
Ma hydroxypropyl methylcell ...
Astaamaha iyo adeegsiga wareejinta ...
Codsiga Redispersibl ...
7F, Dhismaha 3B, Aodong Zone, Degmada Quanshan, Xuzhou, Shiinaha
Hada na Soo wac: 0086-18118579776